eNasha.com - परदेशबाट छोरो फर्केन...
परदेशबाट छोरो फर्केन...
एक दिन साँझ कर्ण दास खाना खाइओरी सुत्ने तर्खरमा थिए । त्यस दिन किन हो उनलाई उति राम्रो निन्द्रा लागेको थिएन । मन पनि उनको उदास-उदास थियो । यत्तिकैमा उनका छिमेकीले फोन आएको जनाऊ दिए । उनी गह्रौँ मन लिएर ओछ्यानबाट ओर्लिए र फोन रिसिभ गर्न छिमेकतिर दगुरे । उनले कानमा फोन अड्याउँदै भने- 'हेल्लो !'
उताबाट जुन आवाज आयो, त्यो कर्ण लागि सुपरिचित आवाज थियो तर आवाजमा पीडा थियो, गम्भीरता र मधुरोपना थियो । पहिलेको जस्तो आवाजमा उत्साह, खुशी र उमङ्ग थिएन । कर्ण सोधे- 'दाइ सञ्चो छैन कि कसो ? किन आवाज आज बेग्लै सुन्दैछु !'
'सञ्चो छैन भाइ, मेरो मनलाई सञ्चो छैन', उताबाट आइरहेको आवाज जापानबाटको आवाज थियो । बोलिरहेका व्यक्ति चर्चित गीतकार बीबी थापा थिए । जसका दर्जनौँ गीतहरु कर्णले गाइसकेका थिए । कर्णको स्वरबाट उनी यति प्रभावित छन् कि कुनै राम्रो गीत सिर्जना भयो भने बीबी थापा, कर्णलाई सुनाउन बिर्सँदैनन् । त्यो पनि त्यस्तै भएछ, थापाले एउटा गीत सिर्जना गरेछन् । जापानजस्तो ठाउँमा उनको गीतको भाव, मर्म र व्यथा कसले पो बुझ्थ्यो र ! बुझे पनि कर्णले जति गहिराइमा बुझ्न सक्थे, अरुले त्यत्ति नै महत्वका साथ त्यो गीतको मर्म, गहिराई र आशय बुझ्थे होलान् र ! बीबीलाई यस्तै लागेको थियो र त्यो रात कर्णलाई सम्झेका थिए । बीबीले गीतको टुक्रा सुनाउन थाले-
आउँछु आउँछु भन्थ्यो, चारै धाम घुमाउँछु भन्थ्यो...
पर्खिबसेकी मेरी बूढी आमा...
उनले त्यो रातभरि आमालाई सम्झिएर रुँदै रात बिताएका थिए । र, आँशुको भेलसँगै गीतको सिर्जना भएको थियो । जुन दिन कर्णलाई फोन गरेर यो गीतको कथा सुनाइरहेको थिए- कथा सुन्ने कर्ण दास र सुनाउने बीबी थापा दुवैका गहभरि आँशु थिए । आँशुले छपक्क छोपेको थियो कर्णलाई फोनमा बातचित सकिँदा । उनले बीबीबाट अनुमति लिएर त्यसैबखत गीत टिपे । बीबीले पनि कर्णलाई अनुरोध गरे- "भाइ, यो गीत तिमीले गाइदिए, म अभागी छोरोको अपूर्ण श्रद्धाञ्जली पूर्ण हुने थियो !"
गायक लुकेका कुरा सङ्गीतकार रिलिज ट्रयाक बाहिर समुद्रपार नेपाली तारा क्या बात ! कीर्तिमान तातोपीरो अवार्ड उपलब्धि भिडन्त विचार पेज थ्री गायिका प्रेम र विवाह रुचि कन्सर्ट हल्ला